Binance - ကုန်သွယ်မှုလေ့လာပါ။
£ 1 နိမ့်ဆုံးအပ်ငွေ
Binance သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်စျေးကွက်အတွင်း thebiggest cryptocurrency ဖလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Binance လဲလှယ်မှုသည် ၂၀၁၈ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် cryptocurrency ၌ဘုရင်ဖြစ်လာသည်မှာသေချာသည်။ Binance သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးငွေလဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီအသံအတိုးအကျယ်ရှိပြီးအကြွေစေ့တစ်ခုသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ပေါင်းထည့်လိုက်လျှင်၎င်း၏တန်ဖိုးသည်အနည်းဆုံးနှစ်ဆဖြစ်လာသည်။ Binance သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်၊ သို့သော်ဝယ်လိုအားအကြီးမားဆုံးဖြစ်သည့်တိုင်ဘယ်တော့မျှမရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်စျေးပေါ။ ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသုံးစွဲသူအတွက်အဆင်ပြေစေပါသည်။ Binance သည်ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖလှယ်မှုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အများစုအတွက်မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နေသည်။
Offres အထူးသီးသန့် VIP သွန်းလောင်း
$160 min သိုက်
Binance သည်ဤအရေးအသားမတိုင်မီတစ်နှစ်မတိုင်မီစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇ ။ Binance သည်သမားရိုးကျစျေးကွက်များတွင်ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားစွာကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် blockchain နေရာရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပိုင်ရှင်သည်အရောင်းအ ၀ ယ်လျှော့စျေးများအတွက်ပိုင်ရှင်အားအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့်စင်မြင့်နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြွေစေ့ (Binance Coin - BNB) ကိုထုတ်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါမော်ဒယ် hit ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် BNB တန်ဖိုးမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Binance သည်ခြေလှမ်းတိုင်း၌၎င်း၏ရပ်ရွာလူထုနှင့်ပါတ်သက်သော cryptocurrency အရောင်းအဝယ်ရွေးချယ်မှုအသစ်များကိုလျင်မြန်စွာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်၌သူတို့၏အရှိန်အဟုန်မှာမနှေးကွေးဘဲ Binance သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစည်းမျဉ်းများကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဟောင်ကောင်မှမော်လ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့်တိုင် Binance သည်ထိုနယ်မြေအတွင်းသြဇာအရှိန်အဝါအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်သည်။
အရောင်းအဝယ် interfaces ပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အပ်နှံထားသောမိုဘိုင်း app မရှိပါ
Binance မှထောက်ပံ့သော cryptocurrencies အမည်ကိုဖော်ပြရန်အလွန်များလွန်းပါသည်။ 6/12/18 အဖြစ်လူကြိုက်အများဆုံးနေသောခေါင်းစဉ်:
Bitcoin, EOS, EthereumEthereum Classic၊ Binance Coin၊ Bitcoin ငွေ၊ Skycoin၊ Quarkchain၊ Ontology၊ Tron, Loom Network , Aeron ၊ Cardano, Litecoin, ကြယ် Lumens၊ IoTex၊ Ripple၊ CyberMiles၊ IOTAအိုင်ကွန်၊ နာနို၊ နှင့် Neo.
အခြားဒင်္ဂါးများစွာများစွာရှိသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည်နေ့စဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏအနည်းဆုံးဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီရှိသည်။ Binance သည်အသုံးပြုသူများကိုမည်သည့်အကြွေစေ့အသစ်ကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်သွင်းရန်မဲပေးခွင့်ပြုသည်၊ အခြားစီမံကိန်းများနှင့်အပေးအယူလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အကြွေစေ့ကိုထည့်နိုင်သည်။ စီအီးအို Changpeng Zhao ၏အဆိုအရကုမ္ပဏီအသစ် ၁၀၀၀ ကျော်သည်၎င်းတို့၏ဒင်္ဂါးများကို Binance တွင်စာရင်းသွင်းရန်ကြိုးစားနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ တစ်ရက်တွင်မည်မျှထည့်သွင်းမည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါ။
သင်ခန်းစာ။ Binance ကိုဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုကုန်သွယ်လဲ
Binance နှင့်အတူ sign up ကိုတစ်လေပြေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားပြီး၊ သင်၏အီးမေးလ်နှင့်စကားဝှက်အသစ်ကိုပေးပါ။ အတည်ပြုအတည်ပြုသည့်အီးမေးလ်ကိုတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်သို့သာကြာမှစောင့်ပါ။
သင်လက်ခံရရှိသောအီးမေးလ်ရှိအတည်ပြု link ကိုနှိပ်ပါ။ ဆိုက်ကိုပြန်သွားပြီး ၂ Factor Authentication ကို set လုပ်ပါ။ အဲဒါကသင့်ကိုစကားဝှက်တစ်ခုတည်းထက်ပိုပြီးလုံခြုံမှုပေးလိမ့်မယ်။ ဆိုက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ပါက Binance ၏ ID နှင့်သူတို့တောင်းဆိုသည့်လိပ်စာအချက်အလက်များကိုသက်သေခံခြင်း၊ KYC (သင့်ဖောက်သည်ကိုသိသော) စည်းမျဉ်းများကိုနိုင်ငံအသီးသီးမှလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကန့်သတ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သင်၏စာရွက်စာတမ်းနှစ်ခုနှင့်အတူသင့်မျက်နှာ၏ပုံကိုတောင်းရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Binance ၏လိမ်လည်မှုနှင့်ငွေခဝါချခြင်းများကိုသူတို့၏ပလက်ဖောင်းတွင်ရှိနေခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
အပ်ငွေများကို cryptocurrencies တစ်ခုတည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပလက်ဖောင်းမှပံ့ပိုးပေးသော cryptocurrency တစ်ခုစီအတွက် သီးသန့်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခု သင့်တွင်ရှိပါမည်။ သင်၏ Binance ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို သင်၏ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာတွင် ထည့်သွင်းပြီး ထိုနည်းဖြင့် ငွေကြေးပေးပို့ခြင်းဖြင့် အပ်ငွေများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ Binance Send ဖောင်တွင် တောင်းဆိုထားသော လိုင်းထဲသို့ သင်၏ ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်၏ လိပ်စာကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ငွေထုတ်ခြင်းကို ပြောင်းပြန်ဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ အများကြီးရှိတယ်။ YouTube ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပါက ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြသသည့် ဗီဒီယိုများ။ မှန်ကန်သည်ဟု သင်မသေချာပါက ငွေမပို့ပါနှင့်။ သင့်လက်ကျန်ငွေ အပြည့်မပို့မီ ၎င်းကို ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း သေချာစေရန် အလွန်သေးငယ်သော ပမာဏကို အမြဲတမ်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို ၀ ယ် / ရောင်းနည်း
Beginner သို့မဟုတ် Advanced platform များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကုန်သွယ်မှု၏အခြေခံငွေကြေးအဖြစ် Bitcoin, Ethereum, Binance Coin သို့မဟုတ် Tether ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်အဲဒီကုန်သွယ်ရေးကိုမကုန်ခင်ဒီငွေတစ်လုံးကိုငွေသွင်းရပါမယ်။ သင်၏ငွေကြေးကိုသင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ထိုကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအတွဲအားလုံးအတွက်အခြေခံငွေကြေးနှင့်ရရှိနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောအမိန့် (သင်စျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ပါ)၊ စျေးကွက်ဆိုင်ရာအမိန့် (လက်ရှိရရှိနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ သင့်အတွက်စျေးနှုန်းဖြည့်သည်) ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရပ်တန့်ခြင်းဖြစ်စေ (သင်စျေးနှုန်းကိုသင်ရွေးချယ်သော) သတ်သတ်မှတ်မှတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အခြေခံပြီး) ရောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှုရလဒ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ငွေပေးချေပြီးသည်နှင့်သင်၏ဒင်္ဂါးအသစ်များကိုသင်၏ Binance ပိုက်ဆံအိတ်တွင်မိနစ် (သို့) စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းရရှိနိုင်ပေသည်။
သင်၏ Cryptocurrency အသစ်သိုလှောင်နည်း -
သင်ဝယ်ယူခဲ့သောငွေလဲလှယ်ရေးတွင် cryptocurrency ကိုရေရှည်အသုံးမပြုပါနှင့်။ အမြဲတမ်း crypto ဖလှယ်မှုများဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးထိုသူတို့၏ငွေများကိုသိမ်းဆည်းထားသူများသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲဆုံးရှုံးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် Binance တွင်တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့ပါသော်လည်း၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှဖြစ်ပွားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမဆိုလိုပါ။ အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချရန်သင်၏ဒင်္ဂါးများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် Ledger Nano S. ကဲ့သို့သော hardware ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုသို့ software ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုသို့ရွှေ့ပါ။ အရည်အသွေးမြင့်သောပိုက်ဆံအိတ်ရွေးချယ်စရာများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်စာမျက်နှာကိုစစ်ဆေးပါ။
Binance သည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းနှစ်ခုဖြစ်သော“ အခြေခံ” နှင့်“ အဆင့်မြင့်” တို့ကိုပေးထားသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာအသွင်အပြင်နှင့်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းတွင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောဇယားကွက်မြင်နိုင်မှုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူအသစ်များအတွက် Binance ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း၏ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲသည်အမှန်တကယ်ပင်အလိုလိုသိသည်။ အသုံးပြုသူများသည် Limit, Market နှင့် Stop-Limit အမိန့်အမျိုးအစားများကိုပလက်ဖောင်း၏မူကွဲနှစ်ခုလုံးတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ပလက်ဖောင်း၏ဗားရှင်းသည်အခြားတစ်ခုထက်အသုံးပြုရန်ပိုမိုခက်ခဲသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မထင်ပါ၊ သို့သော်အသုံးပြုသူကအမြဲတမ်းနှစ်သက်သောနည်းလမ်းရှိသည်။
website ကို URL ကို: https://www.binance.com/
ဘာသာစကားများအင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ တာကစ်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီ၊ ဒတ်ခ်ျ၊
Binance ကိုဟောင်ကောင်ရှိဘဏ္bodiesာရေးဌာနများမှကန ဦး ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ပြည်တွင်းလဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်ခြင်းကြောင့်တိုက်ရိုက် / သွယ်ဝိုက်။ ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဟောင်ကောင်သည်အမှန်တကယ်မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ ၁၀၀% သည်ကျယ်ပြန့်သောတရုတ်အစိုးရ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသော်လည်း Binance ၏အနာဂတ်မှာမသေချာမရေရာဖြစ်နေဆဲပင်။ Binance ၏နိုင်ငံတကာရောက်ရှိမှုသည်အရှေ့နှင့်အနောက်ကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်နှင့်အမျှဂျပန်နှင့်အမေရိကန်တို့မှစည်းမျဉ်းအတားအဆီးများနှင့်အတူအိမ်သို့မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အတူ Binance ကို“ Blockchain Island” သို့မော်လ်တာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ဤတွင်စည်းမျဉ်းမူဘောင်သည် Binance နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးရန်သက်သေပြနေပြီးဤကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည်အားပြိုင်မှုနှင့်အလားအလာရှိသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးရင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုခွင့်ပြုသည့်အချက်များကိုအတူတကွအားပြိုင်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုရှိကြသည်။ ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုမမြင်ရသေးပါ။
အသုံးပြုသူလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Binance သည်ဖလှယ်မှုအတွက်အလွန်လုံခြုံသည်ဟုယူဆရပြီးသုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်သိသိသာသာထိခိုက်ခြင်းမရှိသေးပါ။ အဘယ်သူမျှမလဲလှယ်သည် 100% လုံခြုံမှုမရှိသော်လည်း၊ ဘီလီယံနှင့်ချီ။ ကာကွယ်ထားသောငွေအရင်းအနှီးများရှိသောကမ္ဘာ့ ဦး ဆောင်သည့်ပလက်ဖောင်းအတွက်မူ Binance သည်အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
Binance အခကြေးငွေ & ကန့်သတ်
Binance ၏အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံသည်ပလက်ဖောင်း၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာဖြစ်နိုင်သည်။ အားလုံးကုန်သွယ်မှု 0.10% ကော်မရှင်အားသွင်းနေကြသည်။ အသုံးပြုသူများသည် Binance ၏ BNB ဖြင့်ငွေပေးချေလျှင်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးအတွက် ၀.၀၅% လျှော့ချသည်။ ဤသည်မှာသင်ရောင်းဝယ်မှုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းသောဖလှယ်မှု မှလွဲ၍ သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။
ငွေကြေးအားလုံး၏အပ်ငွေများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူသည့်အကြွေစေ့များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောနှုန်းထားများဖြင့်ကောက်ခံသည် ဤနေရာတွင် Binance ၏ငွေထုတ်ယူမှုများ။
Binance သည်အသုံးပြုသူများအား Bitcoin, Ethereum, Binance Coin နှင့် Tether သုံး၍ altcoins များကိုပေးဆောင်စေသည်။ အခြား altcoins များကိုအခြားအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်လက်ရှိအချိန်တွင်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။ Binance သည်ငွေပေးချေမှုကိုလက်မခံပါ။ မကြာမီပြုလုပ်ရန်အစီအစဉ်မရှိပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတင်းကျပ်မှုသည်အလွန်တရာဖြစ်လိမ့်မည်၊ Binance သည်သူတို့၏မော်လ်တာရှိသူတို့၏နေအိမ်အသစ်သို့ ၀ င်ရောက်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်နံပါတ်တစ်အသုံးပြုသူလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ Binance သည်အံသြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပုံရသည်။
အခြားဖလှယ်မှုများကဲ့သို့ပင် Binance သည်အီးမေးလ်ဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုလက်ခံသည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုမရယူမီ Binance သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုတွက်ဆနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးဘုံမေးခွန်းများနှင့်သူတို့၏ဖြေရှင်းချက်များစာရင်းကိုပြသသည်။ သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုပေးပို့ခြင်းအဆုံးသတ်ပါက Binance ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုသည် (ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအရ) တုံ့ပြန်မှုနှင့်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
Binance သည်မည်သည့်အရာမျှအမှန်တကယ်ထူးခြားသည်မဟုတ်တော့ပါ။ သို့သော်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းသည်ခိုင်မာသောဝိသေသလက္ခဏာများစွာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်ရပ်တည်နေသည်။ အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာကူးယူထားသောတီထွင်မှုများမှာသူတို့တီထွင်မှုများမဟုတ်တော့ပါ။
ပျမ်းမျှအသုံးပြုမှုအတွက် Binance ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာ Binance Coin BNB ဖြစ်သည်။ ဒီအကြွေစေ့ ICO ကတည်းက 1000% ကျော်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးရှိပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် Binance အသုံးပြုသူများကကုန်သွယ်သည်။ BNB သည် KuCoin ကဲ့သို့သောအခြားဖလှယ်မှုများဖြင့်ကူးယူထားခြင်းခံရသော်လည်းမည်သည့်အခြားလဲလှယ်မှုတွင်မှသူတို့ပိုင်ဆိုင်သော cryptocurrency သည်နိုင်ငံတကာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာသည်ကိုမတွေ့ရပါ။
ထူးခြားသောဟုခေါ်တွင်စေနိုင်သော Binance အတွေ့အကြုံ၏အခြားရှုထောင့်တစ်ခုမှာ Binance တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစီမံကိန်းများအမြောက်အမြားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ များစွာသောအခြားအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုအများအပြားတွင်တန်ချိန် (cryptocurrencies တန်ချိန်နှင့်တန်ချိန်) ရှိသော်လည်း Binance ကဲ့သို့ပင်အနည်းငယ်သောသူတို့သည်အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်မထင်ရှားသောဒင်္ဂါးများကိုပင်သုံးစွဲသူများအားယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုရရှိစေသည်။ ပိုများသော Cryptocurrency ဖလှယ်မှု။
Binance နှင့် eToro တို့သည်အမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောအရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာများဖြစ်သည်။ Binance သည်ဆွေးနွေးပြီးသောနည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ cryptocurrencies ကိုရောင်းချသည်။ eToro သည် cryptocurrencies လုံးဝမရောင်းပါ။ ၎င်းအစားသုံးစွဲသူများသည် crypto တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ပိုမိုနိမ့်သောအတားအဆီးများဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အစဉ်အလာပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်၊ အသုံးပြုသူများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ဖန်တီးထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များကို အသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏ငွေကြေးအားလုံးကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် လွှဲပြောင်းသိမ်းဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရှုပ်ထွေးသောသော့နှင့် လိပ်စာစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် (အသုံးပြုသူမှ ၎င်းတို့ကို ဆွံ့အသွားပါက) ဖြစ်ပေါ်စေမည်ကို သင်တွေ့မြင်ရပါသည်။ ရန်ပုံငွေဆုံးရှုံးမှု။ eToro သည် မည်သည့်စနစ်မှ မသုံးပါ။ crypto ကိုရောင်းမယ့်အစား၊ သူတို့ကရောင်းတယ်။ CFDs.
CFD ဆိုသည်မှာခြားနားချက်အတွက်စာချုပ်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် cryptocurrencies (NEO, EOS, Bitcoin နှင့် Stellar Lumens ကဲ့သို့သောအားကြီးသောစီမံကိန်းများ) ၁ ခုအတွက်စျေးကွက်ပေါက်စျေးကိုပေးသည်။ ဤငွေကြေးကိုပိုက်ဆံအိတ်သို့လွှဲပြောင်းမည့်အစားအသုံးပြုသူ၏ရန်ပုံငွေများသည် crypto ၏ပမာဏကိုကိုယ်စားပြုသောစာချုပ်တစ်ခုတွင်သော့ခတ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူသည်အချိန်မရွေးကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
စာချုပ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောအခါပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းမြင့်လာပါကအသုံးပြုသူသည်ငွေကိုလက်ကျန်ငွေနှင့်အကောင့်၏ပိတ်မှုနှင့်အတူသော့ဖွင့်ရသောစာချုပ်၏လက်ကျန်ငွေကိုပြုလုပ်သည်။ အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်သည့်အခါစျေးနှုန်းနိမ့်လျှင်, ယခုခြားနားသောလက်ကျန်ငွေမှခြားနားချက်ကိုနှုတ်ယူသည်။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အသုံးပြုသူများအားခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ cryptocurrency ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုတွင်သင်သည် cryptocurrency ကိုဝယ်လိုလျှင်၎င်းကိုသင်သုံးစွဲနိုင်သည် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ - သုံးစွဲနိုင်သည် - eToro သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမဟုတ်ပါ။ သင်သာတန်ဖိုးကိုခန့်မှန်းလိုလျှင် eToro သည် Binance နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုလွယ်ကူသွားစေလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် Binance သည်သင့်အားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဒင်္ဂါးများစွာများစွာပေးသည်။ သင်ရွေးချယ်သောမည်သည့်ပလက်ဖောင်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့် ဦး စားပေးမှုအပေါ်တွင်လုံးလုံးမူတည်လိမ့်မည်။ အခြားရွေးချယ်စရာ Cryptocurrency ဖလှယ်မှု။
နိဂုံး: Binance သည်လုံခြုံပါသလား။
တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Binance ကိုအနည်းငယ်ကြိုက်ကြောင်းဝန်ခံရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများကိုအခြားအရေးပါသောကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူများထက် (သိသာထင်ရှားသည့်ကုန်သွယ်မှုပမာဏနှင့်အတူ) ပို၍ cryptocurrencies ကိုပိုမိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသောအပြည့်အဝအသားပေးကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း site တွင်အားနည်းချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်သုံးစွဲသူများကို BNB တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများပေးသည်၊ ဒင်္ဂါးများစွာတန်ဘိုးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရရှိနိုင်သည်။
သို့သော် Binance သည်လုံခြုံပါသလား။ အဘယ်သူမျှမ cryptocurrency လဲလှယ်အမှန်တကယ်လုံခြုံသည်။ လုံခြုံမှုသည်သူတို့၏အဓိက MO မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သူတို့တတ်နိုင်သလောက်လုံခြုံမှုရှိရမည်။ ဖလှယ်မှုများသည်အားနည်းချက်များကိုဖန်တီးပေးသောဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာအတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖွင့်ပေးသည်။ ဒီကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ငွေကိုကိုင်ထားပြီးနောက်ကျောမှာကြီးမားတဲ့ပစ်မှတ်မထားနိုင်တော့ဘူး။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Binance သည်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးကိုရရှိထားပြီးဟက်ကာများရန်ပုံငွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုကိုမတွေ့ရသေးပါ။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့် Binance ဤကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ။ အတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားတဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အသင်းရှိပါတယ်။ အရာများမကြာမီပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Binance ကိုအကြံပြုနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းသုံးပါ၊ ခင်ဗျားယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ကုန်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးတွင်ကံကောင်းပါစေ။
အင်္ဂလိပ်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ တာကစ်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီ, ဒတ်ခ်ျ,